Biden ayaa xasuuq u aqoonsaday dilkii Cusmaaniyiinta ay u geysteen dadka Armenia… – Hagaag.com
Biden ayaa xasuuq u aqoonsaday dilkii Cusmaaniyiinta ay u geysteen dadka Armenia…
Posted on 25 Abriil 2021 by Admin in World // 0 Comments
Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa Sabtidii shalay xasuuq u aqoonsaday dilalkii badnaa ee xilligii dagaalkii koowaad ee adduunka ay boqortooyadii Cusmaaniyiinta Turkiga ka gaysteen waddanka jaarka la ah ee Armenia.
Ilaa 100 xubnood oo ka tirsan aqalka wakiilada Mareykanka oo ka kala socday labada xisbi ayaa warqad ay Arbacadii qoreen waxa ay Biden ku booriyeen in uu noqdo madaxweynihii ugu horreeyay ee Mareykan ah ee dilalkaasi u aqoonsada xasuuq.
Wasiirka Arimaha Dibada Turkiga Mevlut Cavusoglu ayaa horaantii toddobaadkan sheegay in aqoonsiga Biden uu dhaawici doono xiriirka ka dhaxeeya xulafada NATO. Cavusoglu ayaa Sabtidii ku sheegay qoraal uu soo saaray in aqoonsiga Biden “uu qalloocinayo xaqiiqooyinka taariikheed, taas oo aysan dadka Turkigu waligood aqbali doonin, wuxuuna furi doonaa nabar qotodheer oo wiiqaya is aaminaadeenna iyo saaxiibtinimadeenna.”
“Waxaan ugu baaqeynaa Madaxweynaha Mareykanka in uu saxo qaladkan weyn, oo aan laheyn wax ujeeddo ah marka laga reebo qancinta kooxo siyaasadeed, iyo in uu taageero dadaallada ujeedkoodu yahay in la abuuro dhaqan ay si nabad ah gobolka loogu wada noolaado, gaar ahaan qowmiyadaha Turkida iyo Armenia, intii uu u adeegi lahaa ajandaha kooxahaas isku dayaya in ay cadaawad ka abuuraan taariikhda,” ayuu wasiir Cavusoglu ku daray.
Turkiga ayaa meesha ka saara inuu jiray xasuuq iyo qorshe kasto oo si ula kac ah loogu ciribtirayo Armenia. Waxa ay sheegtay in qaar badan oo ka mid ah dhibbanayaashu ay ku dhinteen dagaalka ama ay dileen Ruushku.
Turkiga ayaa sidoo kale sheegaya in tirada dadka reer Armenia ee la dilay ay aad uga yar tahay tirada inta badan la isla wada oggol yahay ee gaareysa 1.5 milyan.
Dhanka kale, dowladda Turkiga ayaa u yeertay safiirka Mareykanka u fadhiya dalkaasi David Satterfield, kaas oo ay weydiisay su’aalo ku saabsan go’aanka madaxweynihiisa, waxaana ay u sheegeen in go’aankaasi uu abuuray dhaawac aan la bogsiin karin.